भर्नु भयाे त ? रु रु जलविद्युतको आईपीओमा आवेदन दिने आज अन्तिम दिन « Dainiki
भर्नु भयाे त ? रु रु जलविद्युतको आईपीओमा आवेदन दिने आज अन्तिम दिन
२४ चैत, काठमाडाैँ । रु रु जलविद्युत परियोजना लिमिटेडले चैत २० गतेदेखि सर्वसाधारणमा निष्काशन तथा बिक्री खुला गरेको साधारण सेयर (आईपीओ) मा आवेदन दिने आज अन्तिम दिन रहेको छ। कम्पनीले दोस्रो चरणमा सर्वसाधारणका लागि २० रूपैयाँ प्रिमियम थपेर १२० रूपैयाँका दरले ४ लाख ७ हजार ७ सय ६ कित्ता आईपीओ निष्कासन तथा बिक्री खुल्ला गरेकाे हाे ।
जसमध्ये, २ प्रतिशत अर्थात् ८ हजार एक सय ५४ कित्ता कर्मचारीहरुका लागि, ५ प्रतिशत अर्थात् २० हजार ३ सय ८५ कित्ता सामूहिक लगानी कोषका लागि र बाँकी ३ लाख ७९ हजार एक सय ६७ कित्ता सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुका लागि छुट्याइएकाे छ ।
प्रकाशित मिति: २४ चैत्र २०७७, मंगलवार १०:२७